Wednesday May 01, 2019 - 06:57:41 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Maamulka Donald Trump ayaa qorshaynaya in liiska waxa loogu yeero Argagaxisada uu ku daro Ururka Ikhwaanul Muslimiin oo kajira inta badan dalalka Carabta gaar ahaan Masar.
Sarah Sander oo ah Afhayeennada Aqalka Cad ayaa sheegtay in Trump uu ka fikirayo sidii Liiska Argagaxisada uu ugu dari lahaa Ururka Ikhwaanul Muslimiin oo si aad ah ugasoo horjeedo dowladda Cabdi Fataax Alsiisi madaxda ka yahay.
"Madaxweyne Trump wuxuu latashi lasameeyay saraakiisha dhanka amniga iyo Hoggaamiyaasha Bariga dhexe kuwaas oo welwelsan khatarta ka imaanaysa Ururka Ikhwaanka" ayay tiri Sarah Sander.
Haddii dowladda Mareykanka ay liiska Argagaxisada ku darto Ururka Ikhwaanka ee dhax dhaxaadnimada ku fogaaday waxay gogol xaar unoqon doontaa in uu cunaqabateyn kusoo rogo hoggaamiyaasha Ururka ee isaga kala goosha caalamka.
Ururka Ikhwaanka oo 20 sanadood ka hor ku dhawaaqay tanaazul dhanka Fikirka ah ayaa ka tagay hanaanka jihaadka waxayna uweecdeen dhanka siyaasadda ku dhisan in laga daba rucleeyo waxa loogu yeero beesha caalamka iyo sharciyadeeda.
Ikhwaanka ayaa ka xuub siibtay Salafiyada Jihaadka waxayna qaateen siyaasad ku dhisan dhaxdhaxaadnimo wax walba aqbalaysa iyagoona xilal hoose ka haya qaar kamid ah dowladaha Carabta sida Urdun,Marocco, iyo Filasdiin balse Turkiga ayaa ah dowladda kaliya ee uu hoggaamiyo Ururka Ikhwaanka.
Sanaddii 2011 ayay mas'uuliyiinta Ururka Ikhwaanka ku guuleysteen doorashooyinkii madaxtinimada dalka Masar balse Melleteriga ayaa Inqilaab dhiig badan ku daatay ku riday Max'med Mursi iyo mas'uuliyiintii Ikhwaanka wixii xilligaas ka dambeeyana waxaa gudaha Masar looga aqoonsaday Urur Argagaxiso.
47 sano kadib dowladda Ingiriiska oo isaga baxday Ururka Midowga Yurub.
Donald Trump oo sheegay in ciidamadiisa aysan wax khasaara ah kasoo gaarin duqeymihii Iiraan.